Ọ bụ oge mbụ onye ahịa anyị Kenya zụtara ihe mbuli akụkụ 37ton n'aka CCMIE, onye ahịa ahụ ka tụkwasịrị CCMIE obi nke ukwuu. Onye njikwa ahịa anyị mere naanị nkọwa zuru ezu maka onye ahịa ịhọrọ site na, dịka mkpa onye ahịa si dị, anyị na -akwado ihe kachasị ...
Taa, anyị na -eme mgbasa ozi nke ihe ọmụma, ihe mejupụtara Side Loader Trailer Side Loader Truck nwere ọtụtụ akụkụ 1. Ịga n'akụkụ lita nke ụgbọala na -adọkpụ, anyị nwere ike họrọ ka (PTO) kwadoro anyị, ma ọ bụ anyị nwere ike họrọ iji nke nọọrọ onwe ya. engine inye ike. Modzọ ike abụọ a na -enye po ...
N'oge na-adịbeghị anya, Shanghai Port Machinery Heavy Industry ewepụtala onye na-agbasa igbe nwere okpukpu abụọ nke nwere ike imeghari n'usoro ụlọ ọrụ zuru oke nke iru stacker dabere na ọkọlọtọ otu-akpa ruru stacker. Ogwe igbe nwere okpukpu abụọ nwere ọmarịcha nhazi na nhazi usoro. Ọ nwere ike...
Nsonaazụ efu! A na -ewepụta ọkwa mba ụwa maka igwe na -ebuli ihe site na ụlọ ọrụ Zhenhua Heavy Industry
Na June 17, ọkọlọtọ mba ụwa ISO 7752-5: 2021 “Ngwa na-ebugharị igwe-nhazi na njiri mara-akụkụ 5: Bridge na Gantry Cranes” yana ọkọlọtọ mba ụwa ISO 9374-5: 2021 “Crane-Ozi ga-enye ya. Ndị na -ebubata ihe na ndị na -azụ ahịa - Nkebi nke 5: Bridge a ...
ZPMC Super Reach stacker usoro ngwaahịa
site na nchịkwa na 21-04-05
N’oge na -adịbeghị anya, ewepula usoro usoro ZPMC Super Reachstacker n’usoro nzukọ otu otu, na -etinye ike ọhụrụ n’ahịa igwe na -enuba. Stacker nke nwere ike iru nwere ike izute mkpa nnyefe dị elu nke ọdụ na yaadị dị iche iche, ma nwee ọgụgụ isi na nchekwa. T ...
Afọ 5, site na 95 ruo 104! ZPMC rutere Stacker
site na nchịkwa na 21-02-02
Reach stacker, nke a makwaara dị ka crane n'ihu akpa, bụ igwe eji agagharị agagharị maka ibubata na ibudata arịa n'ime yad, n'ọdụ ụgbọ mmiri, na n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Site na mmụba na -aga n'ihu nke ihe nchebe gburugburu ebe obibi chọrọ, mmepe ngwa ngwa nke njem ụgbọ okporo ígwè ...
N'October 27, ndị enyemaka ZPMC Middle East meriri ntinye maka ọrụ mmezi zuru oke nke akụrụngwa ọdụ ụgbọ mmiri COSCO SHIPPING nke Abu Dhabi, gụnyere cayes 11, ụgbọ okporo ígwè 32 na -akpaghị aka, sistemụ ụzọ mbata njikwa, gwongworo 66 dị n'ime, rute stackers, na stackers Na mobile ọzọ ...
Ngwa igwe na -asọba ZPMC na -abanye n'ahịa Kambodia na nke mbụ ya
2020-07-23 Na Julaị 21, ebufere akpa efu anọ ruru stackers na Sihanoukville, Cambodia, na-akara akara oge mbụ ngwaahịa igwe na-asọpụta Zhenhua Heavy Industries batara n'ahịa Kambodia. Ọdụ ụgbọ mmiri Sihanoukville, nke a na -akpọ West Port, dị n'ụsọ oké osimiri ndịda ọdịda anyanwụ nke Ca ...
Jide ịdị elu nke ahịa stacker nwere ike iru
site na nchịkwa na 20-07-13
020-06-08 “Zhenhua ruru stackers bụ onye ama ama na ụlọ ọrụ n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya. Anyị na -atụ anya stackers atọ a na -eto na Port Weihai. ” N'April 9, Shandong Port Group Weihai Port webatara “ndị mmekọ ọhụrụ”. N'okpuru ahịrị nke nnukwu àkwà mmiri buru ibu, atọ fr ...
ZPMC stacker rutere n'ahịa Turkey nke ọma
site na nchịkwa na 20-06-09
2017-06-19 Na June 15, CCMIE na ụlọ ọrụ Mediterenian bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka ibubata stackers. Onye ọchụnta ego nke ụlọ ọrụ Mediterenian bụ ụlọ ọrụ Turkey Potunus, nke nwere mgbazinye bara ụba na arụmọrụ ahịa yana ahụmịhe mmezi n'ọhịa nke obere ngwa igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka ...
ZPMC ji aka ya wepụta ụdị stacker ọhụrụ wee nweta otuto n'aka ndị ahịa
site na nchịkwa na 20-04-08
N'oge na -adịbeghị anya, e zigara ndị ọrụ Mongolia stackers abụọ nke Zhenhua Heavy Industry. Na mbụ, mgbe ndị ọrụ Mongolia gara ebe nrụpụta ụlọ ọrụ maka nyocha saịtị, ha juputara na otuto na nnabata dị elu maka ịdị mma stacker ụlọ ọrụ ahụ. Zhenhua Heavy Ind ...
Mbupụ mbupu akụkụ CCMIE na Oceania
site na nchịkwa na 20-02-03
N'oge na -adịbeghị anya, e zigara ngwaahịa crane nke dị n'akụkụ n'akụkụ nke ọma na saịtị ọrụ onye ọrụ na Papua New Guinea na Oceania. Companylọ ọrụ CCMIE nke dị n'akụkụ akụkụ mepụtara na Septemba 2013 dabere na mgbaze dị omimi na nnabata nke teknụzụ dị elu nke akụkụ ...